🥇 Ubalo-mali lokuziswa kwezinto
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 497
Ividiyo ye-accounting yokuhanjiswa kwezinto
Odola ubalo-mali lokuziswa kwemathiriyeli
I-Universal Accounting System yinkqubo ekwazi ukulungelelanisa nayiphi na imveliso kunye neshishini, isebenzisana nezixhobo ezahlukeneyo kunye nokungenisa idatha kwiintlobo ezahlukeneyo zeziseko zolwazi. Unokudlulisa ulwazi kwi-USU kwisixhobo sakho se-Intanethi, umzekelo, ukuze umxhasi azi ukuba yeyiphi inqanaba ukuthuthwa kwempahla yakhe. Ngenkonzo enjalo, isiseko somthengi siya kukhula yonke imihla. Ukuba ishishini lakho ligxile kwizinto zokwenziwa okanye kuthutho lwempahla, ke i-USU yinkqubo eyenzelwe wena ngokukodwa. Isicelo sifanelekile kuzo zombini ukuhanjiswa kwekhuriya kunye nokubalwa kwezinto eziphathekayo. Ekubeni ukubalwa kwengxelo yokuhanjiswa kwezinto yinxalenye ebalulekileyo yothutho lwempahla kwishishini. Kwaye ifuna ukubeka esweni ngononophelo ukuphucula umgangatho wenkonzo yabathengi kwicandelo lenkonzo. Xa ukhetha isoftware yeshishini lakho, kufuneka uqwalasele iinjongo ozisukelayo. Abadwelisi benkqubo bethu batyale imali kwi-USU yonke imisebenzi eyimfuneko ukuze kusebenze kakuhle umbutho kwinkalo yokubala iinkonzo zokuhanjiswa kwezinto. Kwaye ukuba awufumani umsebenzi owufunayo, siya kuvuya ukuyongeza kwiNkqubo yoCwangciso-mali yeHlabathi. Kwakhona, abaprogram bethu babonelela ngenkxaso kuwo onke amanqanaba okuphunyezwa kwesoftware. Kwaye unokuqhelana nokusebenza okusemgangathweni kwesoftware engezantsi kwiphepha ngokukhuphela uguqulelo lwayo lwedemo.
Ukubalwa kweenkonzo zokunikezelwa kwezinto kuchaphazela ama-nuances anje: ukubalwa kwezithuthi kunye nabaqhubi, iindleko zezinto zokuthutha, ukubala ixesha kunye neendlela zokuhanjiswa, kunye nokubalwa kweendawo zokugcina iimpahla kunye nemveliso kubo. Njengoko kukhankanyiwe ngasentla, i-Universal Accounting System yinkqubo yendalo yonke engakwazi ukulawula ukuhanjiswa kuphela, kodwa iphinde ithathele ingqalelo yonke imiba yokugcina kunye nokubalwa kwezinto eziphathekayo kwindawo yokugcina impahla. I-USU iya kubonisa ukuba zeziphi izinto eziphathekayo kunye nokuba zeziphi izixa ezigcinwe kwindawo yokugcina impahla, isicelo siya kuthathela ingqalelo zonke iintsilelo kwaye sibonise i-surplus. Oku kuyimfuneko kulawulo olupheleleyo lweshishini lakho lokuhanjiswa kwezinto eziphathekayo. Ngokusebenzisana nezixhobo zorhwebo, ngaphandle kobunzima, ngokuthe ngqo, unokufumana ulwazi kuyo yonke into egcinwe kwindawo yokugcina impahla. Ngoku awudingi ukuchitha onke amandla akho kunye neentsuku ezininzi kuluhlu. Ngokufunda iikhowudi, i-USU iya kwenza uluhlu lwempahla ngexesha elifutshane. Sisixhobo esiyimfuneko kwimveliso yakho, oya konga ngayo ixesha kunye nemali.
I-USU isebenza njengenkqubo yeCRM, okuthetha ukuba iya kwenza unxibelelwano phakathi kwakho nabathengi bakho lube lula kwaye lube nolwazi kangangoko. Emva kokufumana izicelo zokuhanjiswa kwezinto eziphathekayo, ufaka idatha efunekayo kwisofthiwe yokuqhubela phambili ulwazi. Umqeshwa ngamnye uya kuyazi iodolo entsha, njengoko ii-pop-ups ziya kumazisa ngayo. Unako kwakhona ukwahlula amalungelo okufikelela ukuze umqeshwa angaboni ulwazi olungeyomfuneko kwaye uxakeke kuphela kwimisebenzi yakhe yobuqu. Inkqubo kulula ukuyisebenzisa, ukuyiphumeza kwintlangano yakho, umqeshwa ngamnye uya kuqonda ngokukhawuleza ukuba yintoni na. Ujongano olulula nolunemibala, imenyu efanelekileyo kunye nenolwazi-yonke into yenzelwe umsebenzi otofotofo ngesoftware yethu. INkqubo yoCwangciso-mali kwi-Universal kunye nengxelo yeenkonzo zokuhanjiswa kwemathiriyeli iya kuba yimfuneko kumbutho wothutho nokuhanjiswa kwempahla. Inkqubo yethu iya kuthatha ishishini lakho ukuya kwinqanaba elitsha eliphezulu lenzuzo kunye nokuthandwa kwintsimi yayo yomsebenzi.
Ujongano olulula nolunemibala, imenyu efanelekileyo kunye nenolwazi-yonke into yenzelwe umsebenzi otofotofo ngesoftware yethu.
I-Universal Accounting System yinkqubo ekwazi ukulungelelanisa nayiphi na imveliso kunye neshishini lenkonzo, isebenzisana nezixhobo ezahlukeneyo.
Ungadlulisela ulwazi kwisicelo kwisixhobo sakho se-Intanethi, umzekelo, ukuze umxhasi azi ukuba imithwalo yakhe ihanjiswa kwinqanaba elingakanani.
Ukuba ishishini lakho ligxile kwizinto zokwenziwa okanye kuthutho lwempahla, ke i-USU sisicelo esenzelwe wena. Isicelo sifanelekile zombini ukuhanjiswa kwekhuriya kunye nokuhanjiswa kwezinto.
I-Universal Accounting System iya kuba ngabancedisi abangenakususwa ekuboneleleni ngeenkonzo zolungiselelo.
Abadwelisi benkqubo bethu batyale imali kwisoftware yonke imisebenzi eyimfuneko ukuze kusebenze kakuhle umbutho kwindawo yokubala ukuhanjiswa kwezinto. Kwaye ukuba awufumani umsebenzi owufunayo, siya kuvuya ukuyongeza kwiNkqubo yoCwangciso-mali yeHlabathi.
Isofthiwe iya kubonisa: yeyiphi impahla kunye nokuba yeyiphi imilinganiselo egcinwe kwindawo yokugcina impahla, isicelo siya kuthathela ingqalelo zonke iintsilelo kwaye sibonise i-surplus.
Isofthiwe isebenzisana nezixhobo zorhwebo, ngale ndlela, unokufumana ulwazi kuyo yonke into egcinwe kwindawo yokugcina impahla. Ngokufunda iikhowudi, i-USU iya kwenza uluhlu lwempahla ngexesha elifutshane.
Isicelo sisebenza njengenkqubo yeCRM, oku kuthetha ukuba umphumo uya kuba yinto ekhululekile kwaye inolwazi ngokusemandleni. Iinkonzo ezikumgangatho ophezulu ziqinisekile ukuba ziyakukholisa abathengi.
Isoftware iqulethe iifom eziyimfuneko eziprintwayo kunye neenketho zengxelo.
Umqeshwa ngamnye uya kuyazi iodolo entsha, njengoko ii-pop-ups ziya kumazisa ngayo.
Unokwahlula amalungelo okufikelela ukuze umqeshwa angaboni ulwazi olungeyomfuneko kwaye uxakeke kuphela kwimisebenzi yakhe yobuqu.
Ujongano olunemibala, ukhetho loyilo oluvela kumakhulu emixholo ye-prepositional.
Ngena kwisicelo usebenzisa igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha.
Abaprogram bethu babonelela ngenkxaso kuwo onke amanqanaba okuphunyezwa kwesoftware.
Ukuziqhelanisa nemigangatho yemisebenzi yesoftware, unokukhuphela inguqulelo yedemo engezantsi kwiphepha.